Tohivakana | Tohivakan' ny fahamarinana
Ny Tohivakan’ny Fahamarinana, dia mikendry ny hahatongavan’i Madagasikara ho modely amin’ny famerenana ny fahitsiana sy ny fangaraharana amin’ny taona 2027, amin’ny 40 taona namoronan’i pasteur Emilien Razafiarison azy (1987).
Hampiorina sy hampitao ny kristiana anatin’ny Tohivakan’ny Fahamarinana
Hanosika ny fivelaran’ny tambazotra nasionaly mavitrika sy hiarahan’ny kristiana tsy mifidy anaram-piangonana, mientana, miady amin’ny kolikoly
Manao antso avo ho amin’ny fametrahana firenena tan-dalàna.
Tany amin’ny taona 80 dia hita fa nitombo tamin’ny fanaovan-trosa sy ny fahantrana hatrany Madagasikara, na dia teo aza ireo ezaka nataon’ny governemanta. Navesatra tao am-pon’i pasteur Razafiarison, izay tonian’ny Fikambanana Mpiara-Mamaky ny Baiboly, ny fihahaky ny fahantrana ary fahazoan’ny kolikoly vahana. Raha noraisiny an-tsoratra ny fanambaran’ny mpitarika tamin’izany dia mila 700 tapitrisa USD ny firenena hivoahana ny fahantrana. Narahan’i pasteur Razafiarison maso akaiky ny fanampiana ara-bola rehetra noraisin’ny firenena. Tratra anefa ny tanjona ara-bola kanefa dia mbola tanatin’ny fahantrana lalina ny vahoaka Malagasy.
Tao aorian’ny fifadian-kanina telo andro, dia nanangana ny Tohivakan’ny Fahamarinana izy. Na dia tsy nisy ekipa betsaka niaraka taminy, fa tamin’ny herin’ny finoany sy ny faherezany irery, dia nanomboka nanao fotoam-bavaka teny amin’ny birao-mpanjakana samihafa izy ary nanatona ireo mpitarika sy ny olon-tsotra amin’ny sehatrasa samihafa hiady amin’ny kolikoly. Tao anatin’ny 20 taona dia olona an’arivony no niditra tanatin’io hetsika natsangany io. Hatramin’ny nodiany mandry tamin’ny taona 2012 dia mpiasa mahatoky sy mavitrika izy mba hampitodihana ny fon’ny Malagasy amin’Andriamanitra.
Tamin’ny taona 2016 dia nisy mpanompon’Andriamanitra vitsivitsy niaraka namerina indray ny Tohivakan’ny Fahamarinana, anisan’izany ny vady navelany.
Révérend Raharijaona David, Anglikana
Ratsimbazafy Solohery, FLM (Solotenan’ny Chaine any Frantsa)
Lilie Razafiarison, FMMB
Désiré Rabenifara, FMMB
Ny Tohivakan’ny Fahamarinana dia fikambanana misokatra ho an’ny olona rehetra izay maniry hiditra ho mpikambana, kanefa manaiky ny foto-kevitra fototra dia ny: fahatahorana sy fankatoavana an’i Jesoa Kristy Tompo.
Eo anatrehan’ny trangana kolikoly, ny mpikamban’ny Tohivakan’ny Fahamarinana dia milaza hatrany hoe :
“Tsy afaka hanao an’izany amin’i Jesoa aho!” “Ahoana ny ahafahako hanao izany an’i Jesoa?”